Ndị na -emepụta osisi na ndị na -ebubata nri nri | China Food nkwakọ Board Factory
Mpempe akwụkwọ CUPSTOCK UNCOATED
Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Ngwaahịa Cupstock Na mpịakọta/Akwụkwọ Iko/Akwụkwọ/Akwụkwọ/Nri nri/Akwụkwọ Cuostock Ihe 100% Nri Pulp Virgin Virgin 700*1000 889*1194,787*1092,880*730, ma ọ bụ obosara> 600mm na nha nha. Nhazi ahaziri ịdị arọ 170-350g Ịcha ọcha 77% -82% Ịkwakọba na mpịakọta/ Na mpempe akwụkwọ Ibu ibu qty 13-15 Ts Per 20GP; 25 Ts Per 40GP Sample A4 Sample efu na ahaziri nha nlele Cupstock Paper Na mpịakọta nkọwa nkọwa PE ihe ọ wraụ filmụ, onye na -echebe akụkụ anọ, gbara ya n'elu osisi siri ike ...
Mpempe akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa LIQUID/LPB/PAVERER
Ihe nziputa ngwaahịa ngwaahịa mbadamba mmiri/akwụkwọ/bọọdụ // ihe igbe akwụkwọ mmiri ara ehi 100% ogo osisi pulp nke ukwuu 889*1194,787*1092,880*730,700*1000 ma ọ bụ obosara> 600mm na nha nha. Na nha ahaziri ịdị arọ 190g-335g Whiteness PS: 81.0% mbukota na mpịakọta Ibu qty 13-15 Tọn kwa 20GP; 25 Tọn kwa 40GP Sample A4 Sample n'efu na ahaziri nha nlele Liquid Packaging Plastic Bag Packaging Details Reels: Ihe nkiri BOPP kechiri na pallets osisi siri ike, ma ọ bụ ...
PE mkpuchi mkpuchi akwụkwọ/osisi mkpuchi osisi
Akwụkwọ Mgbakwunye Ngwaahịa PE kpuchie Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ/PE & Akwụkwọ Ejiri okpukpu abụọ & Ihe Nkume okpukpu abụọ nke ihe mkpuchi 100% 700*1000 889*1194,787*1092,880*730, ma ọ bụ obosara> 600mm na nha nha. ahaziri nha na -anabata. Ibu ibu 170-350g Akwụkwọ Mgbapụta, Pee naanị 12-20gsm, PE okpukpu abụọ 24-32gsm Whiteness ≥78% mbukota na-abụkarị na mpịakọta. Na mpempe akwụkwọ na -anabata. Ibu qty 13-16 tọn kwa 20FT; 25 tọn kwa 40FT Sample A4 Sample n'efu na ahaziri nha nlele LWC Pap ...